Raha tsy hateraka indray
17 février 201919 h 28 min
Ny Tompo anie hamangy anao mandrakariva. Mihevitra anao ange Jesosy e! Matoa mbola hafaka mizara eto dia mbola manana anjara izaho sy ianao. Mety toriteny efa henonao. Aza ferana ny asan’ny Fanahy Masina, meteza ndray handray ny anjaranao anio.
Ny teny entina androany dia ny fahaterahana indray. Io làlana voalohany indrindra tsy maintsy diavin-tsika raha mangetaheta ny hanana fiainana ianao. Jesosy dia nilaza fa raha tsy hateraka indray isika dia tsy handova ny lanitra. Ahoana ny dingana atongavana amin’izany. Araho ny teny netin’ny mpanompony rahalahy Ezekia
1. Ateraka indray
Fiainana be dia be »